Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : randriamamonjyfrederic
Teny iditra Randriamamonjy Frédéric
Famaritana malagasy Randriamamonjy Frédéric (1932/05/25 - ) [3.1]
Randriamamonjy Frédéric dia teraka tao Ampananganana, Mandialaza, tamin' ny 25 mey 1932, zaza faha-valo tamin' ny sivy mianadahy zanak' i Randriamaro, Mpitandrina sy Ramavo. Avy amin' ny Zafinandriamamy no fiaviany.
Dimy taona izy nony maty ny rainy ary roambinifolo taona izy tamin' ny nahafatesan-dreniny. Tao amin' ny Sekolim-panjakana tao Mandialaza izy no nanomboka ny fianarany. Tamin' ny faha-15 taonany anefa dia tapaka ny fianarany noho ny raharahan' ny 47. Nisy ny maty tao amin' ny fianakaviany ary rava ny fananana. Kanefa noho ny fitahian' Andriamanitra dia afaka nanohy ny fianarany izy, tao amin' ny sekoly protestanta Ambatonakanga, Ambatomanga, Rasalama, Paul Minault, ny Collège Cévenol (Le Chambon-sur-Lignon) ny Westhill Training College (Birmingham) sy tao amin' ny Oniversiten' i Montpellier, Dijon, Durham (U.K), Rhode Island (USA) ary Copenhagen (Danemark), ka nahazo mari-pahaizana momba ny fampianarana sy ny Doctorat de 3ème Cycle ary ny Maitrise momba ny Ecologie.
Nampianatra sy nitondra sekoly tao Ambatonakanga (1958-1961) sy tao amin' ny Kolejy Paul Minault (1963-1965) ary tao amin' ny Institut Pédagogique tao Antananarivo (1967-1970) izy. Tamin' ny 1970 izy dia voatendry ho "Tonia miandraikitra ny fifandraisana amin' ny Fiangonana any Afrika" tao amin' ny Conseil Qecuménique des Eglises tao Genève (1970-1975). Taorian' izany izy dia voatendry ho Ambasadaoron' i Madagasikara tany Moskoa (1975-1986).
Tafaverina teto an-tanindrazana izy tamin' ny 1986 ka nampianatra tao amin' ny Ecole Normale Supérieure (1987-1992). Mpikambana tao amin' ny Haute Autorité de l' Etat (1992-1993) izy, ary Solombavambahoaka tamin' ny 1993-1998.
Diakona tao amin' ny FJKM Tranovato Ambatonakanga izy hatramin' ny 1966 ary Loholona tato aoriana. Mpikambana ao amin' ny Akademiam-pirenena Malagasy. Manana ny mariboninahitra Chevalier de l' Ordre National, Officier de l' Ordre National ary Ordre de l' Amitié des Peuples (URSS).
Tia tanindrazana sy mpanompon' ny Firenena Atoa Randriamamonjy F. ary nankamamy hatry ny fahakeliny ny tantaram-pianakaviany sy ny tantaram-pirenena ka nanao ho zava-dehibe ny fahalalana ny tany sy ny razana niaviana. Na dia niaina sy nitombo tao anatin' ny sarotra aza izy dia nampiseho fa ny faharetana, ny fitiavana sy fanompoana ny Tanindrazana ary ny ezaka dia ny ezaka ihany no lalana hombàna raha mitady fahombiazana eo amin' ny fiainana. Filamatra azon' ny tanora banjinina izany.
Hoy ny Profesora RAKOTO RATSIMAMANGA, Mpikambana ao amin' ny Akademiam-Pirenena malagasy ary Ambasadaoro taloha [Randriamamonjy: Tantara takila 3]
Voambolana Haisoratra: mpanoratra
Asa navoany Tantaran' i Madagasikara isam-paritra